Ithegi: 2021 | Martech Zone
Iimveliso ezilangazelela uKuthethana kufuneka Zenze ezi zinto zintathu
Lwesine, Disemba 2, 2021 Lwesine, Disemba 2, 2021 UJuli Greenwood
Ngelixa umhlaba wawuvaliwe ngo-2020, amava edijithali atyebileyo ngemifanekiso kunye neevidiyo asigcina sinxibelelana. Sithembele kakhulu kunanini na ngaphambili kwiindlela zemveli zonxibelelwano lwedijithali kwaye samkela iindlela ezintsha nezintsha zokwabelana ngobomi bethu kunye nokunxibelelana kumgama okhuselekileyo. Ukusuka kwi-Zoom ukuya kwi-TikTok kunye ne-Snapchat, besixhomekeke kwiindlela zedijithali zonxibelelwano lwesikolo, umsebenzi, ukuzonwabisa, ukuthenga, kunye nokunxibelelana nabantu esibathandayo. Ekugqibeleni, amandla omxholo obonwayo anentsingiselo entsha. Noba kutheni
Ii-Paywall ziye zaba yinto eqhelekileyo kupapasho lwedijithali, kodwa azisebenzi kwaye zenza umqobo kushicilelo lwasimahla. Endaweni yoko, abapapashi kufuneka basebenzise intengiso ukwenza imali ngamajelo amatsha kwaye banike abathengi umxholo abawunqwenela simahla. Emuva kwi-90s, xa abapapashi baqala ukuhambisa umxholo wabo kwi-intanethi, kwavela uluhlu lwezicwangciso: kuphela iintloko eziphambili zezinye, ii-editions ezipheleleyo zabanye. Njengoko bakha ubukho bewebhu, uhlobo olutsha ngokupheleleyo lwedijithali kuphela
Iinkcukacha-manani zokuSetyenziswa kwe-Intanethi ngo-2021: Idatha ayilali 8.0
NgoMvulo, Novemba 1, 2021 NgoMvulo, Novemba 1, 2021 UShirley Stark
Kwilizwe eliya likhula ngokwamanani edijithali, elenziwa mandundu kukuvela kwe-COVID-19, le minyaka iye yazisa ixesha elitsha apho itekhnoloji kunye nedatha zidlala indima enkulu nebalulekileyo kubomi bethu bemihla ngemihla. Kuwo nawuphi na umthengisi okanye ishishini elilapha phandle, inye into eqinisekileyo: impembelelo yokusetyenziswa kwedatha kwindawo yethu yale mihla yedijithali ngokungathandabuzekiyo yondile njengoko sisebunzimeni besibetho sethu sangoku. Phakathi kokuvalelwa yedwa kunye nokuvalwa ngokubanzi kweeofisi,
Ngethuba lokuqala, ukuchitha imali komntu ngamnye kwiHalloween kuya phezulu kwi-100 yeedola. Kulo nyaka, udidi ngalunye lwenkcitho ephezulu- iilekese, imihombiso, isinxibo, kunye namakhadi emibuliso aya kubona ukonyuka okubonakalayo, hayi ngaphezulu kwenani lonyaka ophelileyo, kodwa nangaphezulu kwamanani enkcitho ka-2019. Ishelf, 021 Ukuchitha inkcitho kwiHalloween, ukuthengisa, izibalo, kunye neendlela ezihamba ngazo zeHalloween Statistics ZIHAMBO! Kunyaka ophelileyo, ngaphantsi kwesiqingatha sethu babenomdla wokubhiyozela iHalloween kodwa kulo nyaka inkcitho ibuyile,